iPhone White Screen of Death? - Waxaad wax ka qaban karta in 3 daqiiqo!
iPhone (macruufka 9): Sida loo dayactir Screen White of Death
Muuqashada screen cad, mararka qaarkood la logo tufaax waxa on on iPhone ah (oo ay ku jiraan iPhone 6s iyo 6s Plus), iPad ama iPod loo yaqaan screen cad dhimashada. Screen cad ee dhimasho keeni kara ay sabab u tahay dhowr sababood. Qaar ka mid ah kuwan waa hardware, kuwa kale software. Inta jeer ee, screen cad dhimashada u muuqataa telefoonka ah haddii kale si caadi ah oo shaqeeya baqdin hoos u dhac uu saaran yahay meel adag.
Waxaa jira siyaabo badan in ay la tacaalaan shaashadda cad xaaladda dhimasho. Mid ka mid ah mar walba booqan kartaa dukaanka Apple si ay u helaan qalab la hubiyaa cusboonaysiiyey laakiin qof kasta oo aan awoodin in ay bixiyaan $ 199 oo dheeraad ah oo ay baxsheen. Geerashyada Local sidoo kale lagu dhiso karo hardware sababay screen cad dhimashada laakiin marka ay timaado software, user ma leedahay fursado badan oo ay ku sugaynaa in. Wondershare Ayaa sidaas daraaddeed, bandhigay Dr.Fone oo loogu talagalay dhammaan dhibaatooyinka software ka mid ah qalabka macruufka iyo si fudud ayaa kaa caawin kara la dayactiro iyo Dicumintiyo ah in nidaamka qalliinka.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waxaa loogu talagalay si loo caawiyo dadka isticmaala ee soo kabsaday ay iPhone, iPad ama iPod ka screen cad dhimashada. Way fududahay in la isticmaalo, iyo marka laga reebo qamaar shaashadda cad dhimashada, waxa ay leedahay noocyo kala duwan oo ka mid ah qaababka kale ee ka baxayso iyo sidoo kale. Wondershare Dr.Fone Loo isticmaali karaa in laaban iPhone si uu dib ugu goobaha warshad, si loo soo celiyo qalab jabay, inuu ka soo kabsado iPhone ah shil nidaam ka dib ama ROM biligleynaya dib. Waa ah software kabashada xogta wanaagsan qalabka macruufka oggolaanaysa in dadka isticmaala ay ka bogsanayaan farriimaha qoraalka la tirtiray, sawiro, qoraalo, Deymaha maqan cod iyo wax ka badan. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo kuu oggolaanaysa in dadka isticmaala ay ka bogsanayaan xogta ka iCloud iyo Lugood iyo sidoo.
Si aad u billowdo soo kabsaday qalab aad ka shaashadda cad dhimashada isticmaalaya Wondershare Dr.Fone ee macruufka (la heli karo macruufka 9), RAAC TILMAAMAHAN:
1. Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone in aad Windows ama Mac OS computer. Marka la rakibo dhamaato, xiriiriyaan qalab macruufka ah si aad u computer taasi oo ka cable USB ah oo aan bilowno Dr.Fone.
2. Ka furmo suuqa ugu weyn, dooro "dayactir macruufka si caadi ah" oo ku yaalla midig sare ee shaashadda. Sug Wondershare Dr.Fone si loo ogaado qalab macruufka. Guji "bilow" mar qalab ayaa la ogaado.
3. Si loo xaliyo arrimo aad, Dr.Fone soo bixi doona nooca ugu dambeeya ee aad firmware ka dib markii laga arko aad version macruufka hadda. Hit "Download" oo sug download si ay u buuxiyaan.
4. Sida ugu dhakhsaha badan download ka dhameystiray, Wondershare Dr.Fone bilaaban doona hagaajinta macruufka aad (macruufka 9 waxaa lagu taageeray). Waxay samayn doonaa waxa loo baahan yahay si ay u helaan qalab ka mid ah shaashadda cad ee hab dhimashada aan dhaawac xogta aad. In ka yar 10 daqiiqo, waxaad heli doontaa fariin isagoo sheegay in qalabka la howleheedii in hab caadi ah.
Haddii aad soo raacday oo dhan tilmaamaha kor ku xusan si taxadar leh, qalab macruufka noqon doonaa oo socda waqti lahayn gudahood oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan kiiska, nooca qalad in uu keenay qalab aad u leedahay in screen cad dhimashada waxaa laga yaabaa in la xiriira hardware. Si aad u hesho dhibaatooyinka hardware ka tagi, waxaad u baahan doontaa inaad ku socotaan si aad dukaanka Apple deegaanka ama dukaan kasta oo kale oo qalab Apple sida adiga kuu gaar ah sahlo.
Download version maxkamad xor ah waa in hadda isku dayi keligaa.
Sidee in layska ilaaliyo iPhone galay shaashadda cad dhimashada
1. trick ugu muhiimsan laakiin fudud si looga hortago in aad iPhone (oo ay ku jiraan iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus) galay shaashadda cad dhimashadu waa in ay is ogow wanaagsan waxaa ka mid ah. Ha u soo daadiyaa; haddii butterfingers ay qoyska, waxa sida ugu badan ee aad awoodo sii gudaha jeebkaaga.
2. iibso kiis difaac la dheereeyey geesaha si looga hortago in xiriir toos ah ee telefoonka la dusha sare in ay ku dhaceen. Saameynta ugu yar waxay ka dhigan tahay fursad yar ee aan caadi ahayn hardware ka dhashay dhibicda.
3. Marmarka qaarkood, cadaadis dheeraad ah oo ku saabsan batteriga iyo khayraadka kale ee hardware qalab macruufka ah sabab u yihiin shaashadda cad dhimashada karo. Sidaa darteed, isticmaalin qalabka muddo aan caadi ahayn dheer. Haddii aad ogaato in qalab la kulaylinta ama hadda ka dibna si aad kasta, waxaa nasiyo qaar ka mid ah.
4. Xir hoos telefoonka bishiiba hal mar oo ka dibna waxa uu dib u daaraa 10 ilbiriqsi ka dib. Your phone waddaa aan kala joogsi lahayn oo aad u, landcruiser emails oo dhan, hayaa sawiro oo dhan ammaan ah, waxa laga yaabaa inay u qalmaa tan yar nasashada. Hawshan fudud ka soo bixin doonaa telefoonka kula markii in loo baahan yahay yaraynaya fursadaha muuqaalka shaashada cad dhimashada.
5. screen White dhimashada aan had iyo jeer keena hardware khaldan. Mararka qaarkood, kala carar ku software keeni shaashadda si ay u tagaan oo bannaan iyo caddaan sabab la'aan cad. Carar noocan oo kale ah waa ka caadi in version macruufka hoos ku version macruufka 7. Sidaa darteed, sii qalabka macruufka aad updated u macruufka dambeeyay 9 version.
> Resource > Apps > iPhone: Sida loo dayactir Screen White of Death